DHAGEYSO: 11 qof oo loo xiray kiiska AUN Xamdi Maxamed Faarax & Booliska oo kuwa kale ku daba-jira | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: 11 qof oo loo xiray kiiska AUN Xamdi Maxamed Faarax &...
DHAGEYSO: 11 qof oo loo xiray kiiska AUN Xamdi Maxamed Faarax & Booliska oo kuwa kale ku daba-jira
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa Talaadada maanta ah shaaciyay in kufsigii iyo dilkii AUN Xamdi Maxamed Faarax loogu geystay degmada Waaberi Jimcihii la soo dhaafay lagu eedeeyay 11 ruux, kuwaasi oo hadda gacanta booliska ku jira.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in Ciidanka Booliska ay waddaan baaritaanno ku aadan falkaasi.
Sadiiq Aadan ayaa xusay, in shalay ay gacanta ku dhigeen 11 eedeysane oo falkaasi lagu eedeeyay, islamarkaana hadda baaris ay ku socoto.
“Illaa 11 ruux ayaa hadda gacanta booliska ku jira, waxaana lagu hayaa baaritaan, sidoo kale waxaan ku daba-joognaa dad kale oo la tuhmao inay ku lug leeyihiin dilkii iyo kufsigii lagula kacay Xamdi Maxamed Faarax”, ayuu yiri afhayeenka ciidanka booliska oo warbaahinta la hadlay.
Sidoo kale, Afhayeenka Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegaya, in ay ku raadjoogaan shaqsiyaad kale oo falkaasi lagu eedeeyay.
Allaha u naxatiisto Xamdi Maxamed Faarax ayaa waxa ay ka mid aheyd Ardaydii sanadkan ka qalin jabiyay dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho, iyadoo rag arxan-laawayaal ah inay kufsadeen, kadibna dabaq ku yaalla degmada Waaberi ka soo tuuray.
Halka hoose ka dhageyso Codka Afhayeenka Ciidanka Booliska:
Afhayeenka booliska Soomaaliyeed
Kiiska Xamdi oo dad badan loo xiray
kuwa kale lagu raadjooga